serialization.net [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/6/60dbb147ff919783c22031b4aaeae9b8.xhtml failed
Lesona I: Fanolorana sy Serialization
Rehefa manamboatra laminasa .Net isika dia amin’ny voalohany dia matetika Dataset foana no hampiasaina. Mora hampiasaina izy io satria efa serialisable hatramin’ny voalohany, ka rehefa manamboatra Webservice isika matetika tonga dia Dataset no hampiasaina.
Ny olana anefa dia mavesatra izy io, indrindra rehefa manamboatra laminasa manana arsitektiora maro andalana ( n-tiers), satria ankoatra ny entana entiny dia mbola misy zavatra hafa koa fonosony miaraka aminy. Ny vahaolana dia ny fampiasana ny teknolojia hatsoina hoe DTO (Data Transfert Object), tamin’ny framework .Net kinova 1 dia mampiasa design pattern Object Value, fa kinova 2.0 kosa dia efa tsotra kely ny manao Object Serialization.
Amin’ity lesona voalohany ity dia hampiseho anao ny fanaovana serialization amin’ny alalan’ny Framework .Net 2.0, dia amin’ny manaraka dia hanome ohatra an’arsitektiora maro andalana mampiasa izany isika.
Misy projet Telo izany ireto hampisehoana anao izany amin’ny alalan’ny andrana:
Izy io zany no fitaovana ahafahantsika manao ny serialization
Ao ny hapetrakantsika ilay kilasy (Mpikambana) hiaran’ny serialization.
Io izany ilay laminasa mampiseho ny ohatra fanaovana an’ilay serialization
Toy izao ny vokatra azo rehefa halefa ilay laminasa
Hitantsika amin’izao ary fa dia maivana tokoa ny vokatra azo rehefa mampiasa serialization isika.
Eto ianao raha haka ny code source:
IFG.Andrana.Model sy IFG.Andrana.Serialisation.Win
serialization.net.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43